Misy Slax 7 "Green Horn" | Avy amin'ny Linux
Version 7.0 an'ny Slax, fizarana izay efa efa niresaka an'ity bilaogy ity izahay ary manolotra fanangonana fonosana feno izahay ao amin'ny 210MB fotsiny.
Miaraka amin'i Slax KDE 4.9.4, Mpanangona GCC, mihoatra ny 40 ny localisation sy ny safidy amin'ny fiteny ary ny fampiharana an-taonina. Ny zavatra tsy mampino amin'ity fizarana ity dia ny fanomezana tontolo iasan'ny Desktop tanteraka ary ambany dia ambany ny fanjifany.
Azonao atao ny misintona azy amin'ny fiteny tianao indrindra amin'ity rohy ity:
Mikasa ny hisintona ny iso aho anio alina hizaha toetra azy rahampitso ary hanao famerenana kely
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Misy Slax 7 «Green Horn»
Tsy isalasalana fa fizarana iray tena feno, mampalahelo fa very fihazonana azy, satria tena tsara amin'ny asany io, raha ny marina dia miseho amin'ny sarimihetsika toy ny "The social network", izay manondro fa nandritra ny fotoana iray dia nahasarika be
Ny hitako tamin'io sarimihetsika io dia ny KDE 3.5, ahoana no ahalalanao fa lamba landy io?
Big Elav !! Hiandry ny famerenana izahay, ary avy eo, raha maharesy lahatra ahy izany dia andramako ihany koa. Ary eo anelanelan'i Slax sy Slitaz aho ..
Slitaz dia tsy maintsy misy maivamaivana kokoa, heveriko fa manohy mampiasa openbox sy zavatra vitsivitsy avy amin'ny LXDE, ny zavatra tiako momba an'i Slitaz dia ny mpitantana fonosana sahaza azy (tazpkg), ary manana rindrambaiko miompana amin'ireo milina tsy dia matanjaka ao amin'ny fitoerany izy, mini-distro tena tsara dia tsara, iray hafa tsara dia TinyCore, tsy mbola hitako efa ela, efa micro-distro izany.
Ohatrinona ny fihenan'ny fihinanana?
Mampino ny zavatra tsy ampoizin'ny olona ho hita ao amin'ny KDE misy vokany ated
Niorina ary tsy nisy vokany nafanaina rehefa mandeha ny booty dia mitaky ahy 260 mb. ambany kely noho ny Arch, fa ny fahatsapako kosa dia mihena be ny Slax.
Vao nanomboka tamin'ny milina virtoaly misy RAM 256MB aho ary manidina! 😀
Omaly dia nampidina azy aho ary nametraka azy tao anaty USB, saingy pointer sy background mainty fotsiny no entiny hahahaha mandeha tsara ny làlan'ny baiko, iza no mahalala, angamba noho ny fisintomako ny zip tamin'ny Espaniôla .. ..
Tiako i Slax. Raha tsy diso aho dia ity no andiany voalohany miaraka amin'ny KDE4, sa tsy izany? Tena tara tamin'ny fampidirana azy ireo izy ireo.
Raha ny marina somary voadio raha oharina amin'ny taloha, na dia tiako aza ny KDE 3.5. Amin'ny lafiny iray dia nanapaka rindranasa (angamba hampihena ny lanjan'ilay distro) izy ireo, ary ny sisa tavela amin'ny fitoeram-bokatra (izay mbola tsy mandeha), na dia misy aza ny mpitety maivana maivana toa an'i Qupzilla (mitondra firefox) mety ho tsara. Eo amin'ny lafin'ny "kanto" dia tsara be, manomboka amin'ny boot loader ka hatrany amin'ny birao. Vao nanomboka dia mitentina eo amin'ny 220 MB (mifidy ny safidy «kopia ho ram» tany am-piandohana). Tsy haiko raha ny masiniko io fa rehefa mandeha ny fotoana dia very "valiny" izy io, tsy resaka fitadidiana (tsy mampiasa swap), heveriko fa noho ilay pendrive. Ny hany sisa tavela dia ny fahitana ny zavatra nataon'izy ireo tamin'ny "Software Center", tamin'ny kinova taloha dia somary voarindra ny fanontaniana ny "modules". Azo antoka fa mendrika ny fiandrasana.
Mbola manana CD miaraka amin'i Slax Kill Bill aho taona vitsy lasa izay… Nampiasako azy io mba hitehirizana ireo rakitra nataoko rehefa nianjera ny Windows. Iray amin'ireo CD ireo izay namaha ny olanao tamin'ny toe-javatra mikorontan-tsaina. Hehehe .. Fotoana firy.
tsara ahoana! Noheveriko fa maty ny tetikasa, elaela izy ireo vao namoaka ity kinova ity
Azoko amin'ny rakitra ny rakitra rehetra. Tena kamo ny manandrana distros toy izao